पुष्पा अधिकारीलाई अर्को झट्का: ३ वर्ष जेल र डेढ लाख जरिवाना ! बालगृह गैरकानुनी रहेको खुलासा….(भिडियो सहित) « Nepal's number 1 Entertainment news portal
पुष्पा अधिकारीलाई अर्को झट्का: ३ वर्ष जेल र डेढ लाख जरिवाना ! बालगृह गैरकानुनी रहेको खुलासा….(भिडियो सहित)
Published : 8 August, 2020 10:36 am
राजधानीको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ११ कपन आकाशेधारास्थित केयर बाल गृह गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन गरेको प्रमाणित भएको छ । बालगृह छेउकै चौरमा कार्टुनमा बच्चा भेटिएर उद्धार गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गलत भिडियो बनाएपछि विवादमा तानिएकी पुष्पा अधिकारीले बच्चा लिने क्रममा मात्र नभई बालगृह सञ्चालनमै कानुनको धज्जी उडाएको पुष्टि भएको हो ।
पुष्पाले बालगृह सञ्चालनका लागि समाज कल्याण परिषद् वा केन्द्रीय बाल कल्याण समिति कुनै पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नै लिएकी छैनन् । झन्डै ४ वर्षदेखि बालगृह सञ्चालन गर्दै आएकी पुष्पाले त्यहाँ रहेका १५ जना बालिकाहरू आफूसँग ल्याउने क्रममा वा विदेशी दाताहरूसँग आर्थिक सहयोग लिने क्रममा पनि सरकारी निकायबाट कुनै अनुमति नलिएको देखिएको छ ।
केन्द्रीय बाल कल्याण समितिकी कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसालले यसको पुष्टि गरेकी छन् भुसालले यसको पुष्टि गदै बालगृहकी सञ्चालिका अधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको प्रmित्रया अघि बढाएको टिभी अन्नपूर्णसँग बताएकी छन् । चौरमा बच्चा भेटेको पुष्पाको बयान र त्यसपछि उनले गरेको मिडिया बाजीका कारण सरकारी निकायको शङ्काको घेरामा परेकी पुष्पाले बच्चा फिर्ता गर्दा पनि अर्को मिडिया बाजी गर्न बाँकी राखिनन् । त्यस क्रममा उनले भेटिएकी भनिएकी बालिका पुष्पा आफैले बच्चालाई कार्टुनमा राखेको र भेटिएको भन्ने बाहान गरेको स्विकारेकी थिइन् । यस आधार उनीमाथि अफवाह फैलाएको तथा प्रहरी प्रशासनलाई गुमराहमा राखेको विषयमा समेत अनुसन्धान हुने भुसालको तर्क छ । यसका लागी बाल कल्याण समितिले प्रहरीमा उजुरी समेत गरिसकेको छ ।
अधिकारीले बच्चाहरूको कारण देखाएर ठुलै आर्थिक सङ्कलन भइरहेको र उनको गतिविधि पनि शङ्कास्पद देखिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले नगरपालिका र प्रहरीको समन्वयमा बुधवार बाँकी रहेका ११ बालिकालाई पनि त्यहाँबाट उद्धार गरेको छ ।
त्यसअघि नै नवजात बालिका भेटेको भोलिपल्टै पुष्पाले खबर नगरे पनि सरकारी टोली कपन पुगेको थियो । तर त्यतिखेर उनले आफूले प्रहरीको रोहबरमा बच्चा जिम्मा लिएको बताएपछि सरकारी टोली फिर्ता भएको थियो । पुष्पाको गैर कानुनी करतुतको फेहरिस्त यतिमै मात्र सीमित छैन । अनाथ बालिकाको नाममा उनले बालगृहमा राखेका मध्ये ५ जनाको बाबुआमाको समेत पत्तो लागिसकेको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकाहरूलाई जबरजस्ती अनाथ करार गर्नुलाई समेत अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ । ४ वर्षसम्म कानुन र प्रशासनको आँखा
छलेर आफूखुसी बालगृह चलाइरहेकी पुष्पा छिटो चर्चित हुने र सानी बालिकाको भिडियो सनसनी बनाएर आर्थिक सङ्कलन गर्ने दाउमा लागेपछि नराम्ररी पछारिएकी छिन् । उनीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको र सबै बुझेपछि आवश्यक कारबाही अघि बढाउने सरकारी निकायको तयारी छ ।
गृहमा भिडभाड र मिडिया बाजी बढ्दै जाँदा बालिकाहरूको मानसिकतामा समेत नकारात्मक असर पर्न जाने भन्दै समितिले हस्तक्षेप गरी उनीहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर निकालेको हो । गृहबाट उद्धार गरिएकामध्ये हुम्लाका चार जना काठमाडौँ,
महोत्तरी र रुकुमका दुई–दुई जना तथा डोल्पाका एक जना रहेका छन् । उनीहरूलाई हाल सरकारी निकायको संरक्षणमा मिाली नवीन जीवन नामक संस्थाको आश्रयमा राखिएको छ । बालिकाका अभिभावकबारे बुझ्ने काम भइरहेको भन्दै बाल कल्याण समितिकी व्यवस्थापक भुसालले फिर्ता लान चाहे अभिभावकको जिम्मा लगाउने अन्यथा सरकारले नै उनीहरूको लालन पालन गर्ने जानकारी दिइन् ।
दर्ता नगरी बालगृह सञ्चालन गरेको, बालबालिका ग्रहणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको उपेक्षा गरेको तथा बाबुआमा भएकै बालबालिकाहरूलाई जबरजस्ती अनाथ करार गरेको आरोप प्रमाणित भए पुष्पामाथि पचहत्तर हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन
वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने समितिको भनाइ छ । गैर कानुनी बालगृह सञ्चालन वा बालबालिका ओसारपसार सम्बन्धी अपराधमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले अधिकतम १५ वर्ष जेल र डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।